विज्ञानले गरेको चमत्कारः मृत महिलाको गर्भाशयबाट जन्मियो बच्चा - सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
विज्ञानले गरेको चमत्कारः मृत महिलाको गर्भाशयबाट जन्मियो बच्चा
प्रकाशित मिति : २०७५ मंसिर २०
एजेन्सी । प्रकृतिको नियमनै यस्तै छ जन्मे पछि मृत्यु । कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उसका अंगलाई जिउँदा व्यक्तिहरुको शरिरमा प्रत्यारोपण गरिनु निकै सामान्य कुरा भइसकेको छ अहिलेको युगमा ।
तर मृत महिलाको गर्भाशय जिउँदो महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको यो संसारकै पहिलो घटना हो । यतिमात्र होइन, यो गर्भाशय लिने महिलाले एक स्वस्थ छोरीलाई समेत जन्म दिएकी छिन् ।
ब्राजिलको साओ पालो शहरमा सन् २०१६ मा मृत महिलाको शरिरबाट गर्भाशय निकालेर अहिले आमा बनेकी महिलाको शरिरमा प्रत्यारोपण गरिएको थियो । १० घण्टासम्म चलेको उक्त प्रत्यारोपणपछि ती महिलाको प्रजनन क्षमताको पनि उपचार गरियो ।
यसअघि पनि मृत्यु भइसकेका महिलाको गर्भाशय प्रत्यारोपण गर्न कोसिस नगरिएको होइन तर सबै शल्यक्रिया कि त असफल भए कि महिलाको गर्भपतन भयो ।
कसरी गरिएको थियो शल्यक्रिया ?
जुन महिलाको गर्भाशय लिइयो ती तीन सन्तानकी आमा थिइन् र उनको दिमागमा अत्याधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भएको थियो । यस्तै, गर्भाशय पाउने महिला भने मेयेर–रोकिटान्स्की–होजर सिन्ड्रोमबाट पीडित थिइन् जुन हरेक साढे चार हजार महिलामध्ये एक महिलामा पाइन्छ ।
यस्तो रोग लागेका महिलाको योनी र गर्भाशय सही तरिकाले विकसित हुन पाउँदैन । तर, यी महिलाको ओभरी (अण्डाशय) भने ठिक थियो ।डाक्टरले आमा बनेकी महिलाको शरिरबाट अण्डा निकालेपछि त्यसलाई पिता बन्ने व्यक्तिको शुक्रकिटसँग फर्टिलाइज (निषेचन) गराए ।त्यसपछि महिलालाई यस्तो औषधी दिइयो जसले उनको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई कम गर्दथ्यो ।
रोग प्रतिरोधी क्षमता राम्रो हुँदा उनको गर्भाशय शरिरमा राम्रो तरिकाले व्यवस्थित गराउन बाधा उत्पन्न हुनसक्थ्यो । त्यसको ६ हप्तापछि महिलाको महिनावारी सुरु भयो । त्यसपछि सात महिनापछि फर्टिलाइज्ड अण्डालाई महिलाको गर्भाशयमा राखियो । र सन् २०१७ डिसेम्बर १५ तारिखमा गर्भाशय पाउने महिलाले शल्यक्रियामार्फत २.६ किलोग्रामकी स्वस्थ बालिकालाई जन्म दिइन् ।
लण्डनस्थित इन्पेरियल कलेजसँग सम्बन्धित डा. सरदजान सासोले यो उपलब्धि निकै उत्साहजनक भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यसपछि अब सम्भावित दानकर्ताको संख्या बढनेछ र यसमा खर्च पनि कम हुनेछ । यसले जीवित व्यक्तिको गर्भाशय प्रत्यारोपणको क्रममा आउने जोखिमबाट बचाउन सहयोग गर्नेछ । ’
कोभिशिल्ड’ काे सट्टामा ‘एस्ट्राजेनिका’ खोप लगाउने सरकारकाे तयारी
कोकाठमाडौं । कोभिशिल्ड उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम...
संसदको विघटन गर्दै ओलि सरकारद्वारा चालिएका प्रतिगामी तथा तानाशाही कदमका विरुद्ध संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिका तर्फबाट संयुक्त बिज्ञप्ती प्रकाशित
जेठ १० काठमान्डौ । संसदको विघटन गर्दै ओलि...
२०७४–चुनाव, Feature News, Flash ... , mainNews Read More
नवलपरासी - बरिष्ठ प्रगतिशिल साहित्यकार तारा प्रसाद...
Flash, mainNews, National News ... , News, Sahitya, Tippani Bislesion, Uncategorized, फ्लयास ब्याक Read More